Photo Editing – Afထgy Platform
Course Category: Photo Editing
Coursadani waxaa ku baranayna barnaamijka lagu saxo laguna qurxiyo Photoshop CC. Yaa u Baahan Koorsadaani? Hada rabto ina noqotid graphic designer. Hada tahay photographerska. Hada tahay social media markater. Hada tahay Video Editor. Hada tahay Motion Grapher Maxaa Ku baranayna Korsadaani? Wajiga hore barnamijka guud ahaan iyo toolskiisa sidaa u adeegsan lahayd. Digital images iyo …
Photoshop CC Read More »
Koorsadaani waxa ku baranayna barnaamijka Pixbuilder studio oo lamid ah barnaamijka Photoshop , koorsadani waxy ku sabsanan dontaa sida sawirada loo naqshadeeyo sidoo kale sida colorska loo saxo sidoo kale sido liskugu dhadhajiyo lona jarjarto iyadoo aa baran doono dhowr tools u muhiim ah naqsahadaynta sawirada sidoo kale ugu danbayn waxa isku diri dona naqshado …
PixBuilder Studio Read More »